Itoobiya oo lagu kala yaacay iyo fursadii ay Ogaadeeniya ku xoroobi lahayd oo soo gacan gashayka dib markii Dusuqle is casilay |
Maamulkii kaligii taliyaha ahaa ee ka dhisnaa wadanka Itoobiya ayaa lagu kala yaacay kadib markii ay banaan baxyo aad u xoogbadan gilgileen caasimada wadankaa ee AdisAbaba. sidoo kale waxaa banaanbaxyo kasocdaan Kililada Oromada iyo Amxaarada.
Dawladii uu madaxda ka ahaa Raysalwasaare Xayle Mayam Desalegn ayaa saaka aroornimadii hore ooda ka qaaday maxaabiis tiradooda lagu sheegay ilaa 6500 oo u xidhnaa fikirka siyaasadooda.
Dhinaca kale waxaa meesha ka baxay wadahadaladii ay Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya kula jirtay taliska Adis Ababa tasoo soo afmeertay rajadii laga qabay in Itoobiya kasii taliso deegaanada Ogaadeeniya.
Xayle Maryam ayaa sidoo kale iska casilay gudoomiyo nimadii uruka Tigreega ee awooda dalkaasi luqun jibaarka ku haystay.